11-25-2008 10:36 AM #21
ပြန်စာ -> ပြန်စာ -> သီချင်းခေါင်းစဉ်တွေကို မြန်မာလိုပေါ်ချင်လို့...
[quote author=မောင်မင်းလွင် link=topic=2257.msg13026#msg13026 date=1227516473]
ကျွန်တော်ထင်တာပြောကြည့်မယ်နော်.. မှားသွားရင် Sorry ပါဗျာ...
မြန်မာလို နာမည်ပေးချင်တဲ့ သီချင်းကို ဒီအတိုင်း Rename မပေးပဲ
File&gt;Properties ကနေ Summary Tab ကနေ ပေးထားရင် ရမယ်ထင်တယ်ဗျ..
Title မှာ မြန်မာလို ရိုက်လို့မရဘူး..လေးထောင့်တွေပဲပေါ်နေလို့ပါ...
12-07-2008 02:25 AM #22
ပြန်စာ -> သီချင်းခေါင်းစဉ်တွေကို မြန်မာလိုပေါ်ချင်လို့...
Desktop ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီး properties&gt;&gt; Apperance &gt;&gt; Advanced &gt;&gt; Item အောက်မှာ Active title bar, Icon, Inactive Title Bar, Menu, Message box, Palette title, selected items, ToolTip တွေကို font မှာ zawgyione font ပေးပြီး စမ်းကြည့်ပါ။
[size=10pt]အတိုင်းအဆမရှိသော အထီးကျန်ဘ၀ထဲမှာ ခေါ်လျက်ရှိသော ချစ်သူထံတွင် သင့်နှလုံးသားကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီလော။[/size]
12-07-2008 10:01 AM #23
မြန်မာကီးဘုတ်ကို ကျွန်တော့profile မှာ ထည့်ချင်လို့
အခုလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ ပြန်စာရေးရင် အောက်မှာ မြန်မာကီးဘုတ်ဆိုပြီး အစ်ကိုတို့ ထည့်ပေးထားသလိုမျိုး ကျွန်တော်လည်း http://friendsdaygroup.ning.com/profile/MinHtet ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် page မှာ လုပ်ထားပေးချင်တယ်.....
no1minhtet@gmail.com ကို စာပြန်ပေးလို့လဲရပါတယ်.....
ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် ကူညီပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်....
အခြားသိတဲ့သူဖြေပေးနိုင်ရန် ကျွန်တော် အခြားအခက်အခဲများသို့ရွှေ့ ထားပါတယ်။
12-07-2008 12:48 PM #24
ပြန်စာ -> မြန်မာကီးဘုတ်ကို ကျွန်တော့profile မှာ ထည့်ချင်လို့
ကျွန်တော် တစ်ခု ၀င်ဖောကြည့်မယ်နော်။အဲဒီ social network တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မှာ လုပ်ထားသလိုမျိုး keyboard ထည့်တာလုပ်လို့ ရမယ်မထင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီweb တွေက အသင့်သုံးရုံလုပ်ထားတာလေ။အကို က keyboard ကို ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်ရမှာတွေက အဆင့်တွေ အများကြီးပါ။ပထမဆုံး keyboard ကို host တစ်ခုမှာတင်ရမယ်။နောက်ပြီး java script တွေလိုက်ပြင်ရမယ်လေ။လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ကိုရေခါးပြောသလို ပြောကြည့်တာပါ။ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပါ။
02-09-2009 04:35 PM #25
Google Chrome မှာ မြန်မာလိုမပေါ်လို့
Google Chrome မှာ မြန်မာလိုမပေါ်လို့ပါ။
ဘယ်နေရာမှာ setting ပြောင်းပေးရမလဲ လုပ်ပါအုံး။
02-09-2009 10:46 PM #26
ပြန်စာ -> Google Chrome မှာ မြန်မာလိုမပေါ်လို့
[quote author=cobra783 link=topic=3043.msg19343#msg19343 date=1234173919]
ညာဘက်ဒေါင့်နားမှာ ရှိတယ် .. Setting ဆိုတာ .. ဒီလို ..
အဲဒီကနေ Options ကို သွား ..Google Chrome Options Box တက်လာမယ် ...
အဲဒီမှာ Basics , Minor Tweaks , under the Hood ဆိုပြီး Tag တွေ ရှိတယ် .. အဲဒီ Tag တွေထဲက Minor Tweaks ဆိုတာကို သွားလိုက် ..
အဲဒီကနေ Fonts &amp; Languages က Change Fonts &amp; language Setting ဆိုတာကို သွားလိုက်ပါ ...
ရောက်ရင် ဒီလိုလေး ပြင်ပေးလိုက် ...
အားလုံးပြီးရင်တော့ OK .. ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေလောက်ပါပြီ ...
အဆင်ပြေပါစေ ( တာယာ )
02-10-2009 04:20 PM #27
[move]Google Chrome မှာ မြန်မာလိုမပေါ်လို့ [/move]
ကို Cobra ခင်ဗျား
Google Chrome ရဲ့ ထောင့်ဆုံးမှာရှိတဲ့ &quot;ဂွ&quot; ပုံနဲ့ Customize and Control Google Chorme ကို Click လုပ်ပါ
ပြီးရင် Context Menu ထဲမှ Option ကို ရွေးပါ
Minor Tweaks &gt; Change Fonts &amp; Language Setting ကိုနှိပ်ပါ
Fonts ထဲမှ Change ကိုနှိပ်ပါ
Zawgyi-One Font ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
ထိုနည်းတူစွာ သုံးခုလုံးကို Font ပြောင်းပေးလိုက်ပါ
02-27-2009 11:35 AM #28
PDF ထဲက ' အ ' နေရာမှာ ' A ' ဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ
word file ကို pdf ပြောင်းတဲ့အခါ &#039; အ &#039; နေရာတွေမှာ &#039;A&#039; တွေဖြစ်နေတယ်
02-27-2009 01:32 PM #29
Thanked 309 Times in 69 Posts
ပြန်စာ -> PDF ထဲက ' အ ' နေရာမှာ ' A ' ဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ
Cute PDF writer ကိုသုံးကြည့်ပါလား..ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်..ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာတောင်အဲဒါပဲသုံးတာ
02-27-2009 02:31 PM #30
[quote author=linluck link=topic=3201.msg20630#msg20630 date=1235711138]
ဒီလိုဖြစ်ရတာက ဇော်ဂျီ Version နိမ့်လို့ပါ .. နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Version နဲ့ဆို မဖြစ်ပါဘူး ..
ဒါမှမဟုတ် Dopdf နဲ့ Printout လိုက်ရင်လဲ ဒီလို ဒုက္ခတွေ မရောက်ပါဘူး ..
Software ကော အသုံးပြုပုံကော ဒီနေရာလေး မှာ တင်ထားပေးပါတယ် ...